I-1000 eyodwa-shaft shredder
Imishini ye-single-shaft shredder isetshenziselwa ukugoqa upulasitiki onzima, ipayipi, ukhuni, ibhodi ye-elektroniki njalonjalo. Ikhwalithi ongaqiniseka ngayo. Njengomshini wokugaya, sithole uhulumeni wase-China owenziwe nge-Patent ngo-2013.
I-700 shaft shredder
Imishini ye-shaft shredder isetshenziselwa ukugoqa upulasitiki othambile, izikhwama ezilukiwe, izindwangu, udoti wedolobha, ibhodi kagesi nokunye. Ikhwalithi ongaqiniseka ngayo. Njengomshini wokugaya, sithole uhulumeni wase-China owenziwe nge-Patent ngo-2013.
I-630 double shaft shredder
I-700-shaft shredder eyodwa
630 i-shaft shredder eyodwa
Isixhumi se-shaft esingu-1200
Inqubo yokukhiqiza umshini wokukhiqiza i-flowof Pellet: Isibonisi → i-compactor eluhlaza (isondli) → Isistimu eyandayo